Home » Vaovao momba ny fizahantany » ABA, mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany hafa izay manentana an'i Trump handinika indray ny baiko mpanatanteraka misy fiatraikany amin'ny fizotran'ny fangatahana visa
Ny American Bus Association (ABA) - ny mpitarika indostria mandroso ny maotera amerikana avaratra, ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany - tamin'ny taratasy iray niaraka tamin'ny Fikambanana Mpandeha Amerikanina sy ireo mpiray antoka amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany hafa ho an'ny filoha Donald Trump, dia nanentana ny Trano Fotsy handinika indray ny volana jona 21, 2017 baiko mpanatanteraka izay manafoana ny fepetra namorona ny politikan'ny Departemantam-panjakana hahazoana antoka fa ny 80 isan-jaton'ireo mpangataka visa tsy mpifindra monina dia hadinadinina ao anatin'ny telo herinandro aorian'ny fandefasana fangatahana visa.
“Ny indostrianay dia manohana mafy ny ezaka feno atao mba hiantohana ireo mpitsidika iraisam-pirenena miditra any Etazonia tsy hanadino ny visa sy / na hanao asa fampihorohoroana na heloka hafa. Manohana ny fizotran'ny visa kilasy an'izao tontolo izao sy mahomby ihany koa izahay izay afaka mitantana amin'ny fomba mahomby sy azo antoka ny fangatahana visa an-tapitrisany atolotra isan-taona. Rehefa avy nihemotra nandritra ny taona maro ny visa, dia nanao fandrosoana lehibe ny Departemantam-panjakana, nampihena ny tsy fahaiza-miasa mba hampihena ny fotoana fiandrasana ho amin'ny dingana azo tanterahina. ”
Ny fanesoran'ny Filoham-pirenena izany fepetra izany, ary koa ny fanemorana ny mpiasa na ny fanamoriana ao amin'ny Departemantam-panjakana, dia hampihena ny fandefasana fangatahana visa ara-potoana sy mahomby. Ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany US $ 2.3 miliara dolara ary asa amerikanina 15.3 tapitrisa eo amin'ny sehatry ny indostria dia miankina amin'ny fikirakirana visa ara-potoana sy mahomby. Izay fahatarana ateraky ny baiko mpanatanteraka dia hisy fiatraikany ara-toekarena mivantana amin'ny harinkarem-pirenena sy asa an-tapitrisany.
Nangataka tamin'ny White House ny ABA mba handinika indray ny baiko ary hanisy fanambarana mazava izay miantoka ny fanodinana visa ara-potoana sy mahomby ho an'ireo mpandeha iraisampirenena ara-dalàna.